Vola vita amin'ny glasy ho an'ny fametahana fitaovana China Manufacturer
Description:Fanoroana vatosoa vita amin'ny glasy,Indostria fanala vita amin'ny labozia mba hitotoana fako,Kitapo fanosotra fanosotra
Home > Products > Fanosoram-biriky > Vola vita amin&#39;ny glasy ho an&#39;ny fametahana fitaovana
Model No.: Glass Beads for Grinding Material
Kitaposin'ny Glass for Grinding Standards:
0.8-1mm 1-1.5mm 1.5-2mm 2-2.5mm 2.5-3mm 3.5-4mm 4-4.5mm 4-5mm 5-6mm 6-7mm
Ny Kitapo Glass dia manamboatra singa mahavariana ny toetra ara-batana sy ara-tsika izay tsy misy vokatra hafa.
Ny kofehy vita amin'ny vera dia manana endri-pifaliana tonga lafatra sy tsara tarehy.
Indostria fanala vita amin'ny labozia ho an'ny fanodinana glasy:
Ny teknolojia, ny seranam-piaramanidina, ny elektronika, ny nokleary ary ny orinasa dia mitaky fahafaha-manafaka tanteraka amin'ny fiasa amin'ny fitsaboana amin'ny fiantraikany.
Ny Glass Beads dia ampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny faritra, amin'ny fampiasana ny fiantraikan'ny tsindry mavesatra na maina, amin'ny metaly, plastika, fitaratra, hazo, sns.
Ny fampihetseham-bozaka vita amin'ny vera dia tena samihafa ary ahitana ny: fanadiovana, fametahana ary fanomanana ny tontonana, fanoloana ny endriny, ary ny fifohana sigara.
Ny orinasa tena manufactures Drop-on Glass vakana, prermix Glass vakana, vary main'ny rivotra Glass vakana, mitoto vary Glass vakana sy ireo vakana fitaratra hisainana.
Fiarovan-tena mahery vaika ataon'ny polisy vita amin'ny fanonganam-bolo Contact Now
Kilalao fanakam-peo avo lenta Contact Now
Fanoroana vatosoa vita amin'ny glasy Indostria fanala vita amin'ny labozia mba hitotoana fako Kitapo fanosotra fanosotra Hazavana fanosotra vita amin'ny vera Kitapo mivalona vita amin'ny labiera Porofo matevina vita amin'ny hoditra Lamba vita amin'ny glasy manokana BS6088B Mandoaka eo amin'ny gilaosy